Zimbabwe Yatanga Kutengesa Mangoda Ayo
Nyamavhuvhu 11, 2010
Zimbabwe yakatanga neChitatu kutengesa mangoda ekwaMarange zviri pamutemo mushure mekupihwa mvumo yekuita izvi nesangano reKimberly Process Certification Scheme.
Vanhu vakawanda, kusanganisirawo mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaJohn Nkomo, vauya kuzoona kuparurwa kwechirongwa chekutengeswa kwemangoda, ayo ari kutarisirwa kusimudzira hupfumi hwenyika. Mangoda aya atengeserwa kunhandare yendege yeHarare International Airport.
VaTsvangirai vati mangoda aya anofanirwa kubatsira hurumende kufambisa basa rayo. Ukuwo VaNkomo vatiwo zviwanikwa zvemunyika zvinofanirwa kubatwa nenzira kwayo, uye vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana nemakambani ekunze mukuita mabasa ekuchera mangoda.
Makaratiemangoda anoita mazana mapfumbamwe ezviuru atengeswa neChitatu, ndeekambani yeMbada Diamonds, uye nhumwa yeKimberly Process kuZimbabwe, VaAbbey Chikane, ndivo vapa mvumo yekuti mangoda aya atengeswe.
VaChikane vati vari kuenda kwaMutare kunoona zvakare mangoda ekambani yeCanadile ayo anofanirwa kutengeswa zvakare.
Gurukota rezvicherwa, VaObert Mpofu, havana kuda kutaura kuti hurumende ichawana marii. Asi vati hurumende iri kufara kuti yava kutanga kuwana mari yekufambisa hurongwa hwayo kubva mukutengeswa kwemangoda. VaMpofu vanoti hurumende ichawana zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari ichawanikwa kubva pamangoda atengeswa nekuti hurumende, kuburikidza nekambani yeZimbabwe Mining Development Corporation, ine zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvehupfumi mumakambani ari kuchera mandoda.
VaMpofu vati vanhu vabva kunyika dzepasi rose, kusanganisirawo America, vanga vachida kutenga mangoda aya.
Zimbabwe yakatarisana nenguva yakaoma zvichitevera kuparara kwakaita hupfumi pasati pava nehurumende yemushandira pamwe. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni gumi kuti ivandudze hupfumi hwayo.
Sezvo pasina zvakawanda zviri kupinza mari munyika, hurumende iri kutarisira kuwana mari kubva kumangoda.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zveCrisis in Zimbabwe Coalition, VaDewa Mavhinga, vanoti mangoda aya anofanira kubatsira nyika yose.